विशेष सम्पादकीय : मापदण्डसहित तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर « Janata Samachar
कोरोना संक्रमितको संख्या अप्रत्यासित रुपमा थपिदै गएकोप्रति सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार बढी पुगेपछि नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने स्थिति भएको छ । बुधवार नै एकैदिन ३ हजार ४ सय ३९ जनामा संक्रमित पुष्टि भएपछि संक्रिय संक्रमितको संख्याको आँकडाले २५ हजार पार गरेको थियो । बिहीबार थप ४ हजार ३ सय ६४ जनालाई कोरोना पुष्टि भएसँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या २६ हजार ६ सय ८४ पुगेको छ ।
संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएपछि स्थिति भयावाह अवस्थामा पुग्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । त्यसमाथि कोरोना भाइरसका लागि अनुकुल मौसम अर्थात चिसो मौसम नजिक आएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणको स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने विज्ञहरुको चिन्ता छ । त्यसैले अहिलेको स्थितिमा सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको विज्ञहरुको धारणा छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि गत जेठमै दुई हजार संक्रमित कटे स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने नीति बनाएको थियो । तर मन्त्रालयले उक्त नीति लागू गरेन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीका अनुसार जनस्वास्थ्य ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार रोग नियन्त्रणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एकिकृत हिसाबले सँगसँगै काम गर्नुपर्छ भनेर जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । तर त्यसबेला संक्रमण रोग ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले काम बढाइरहेको र स्थिति पनि नाजुक भैनसकिएकोले संकटकाल घोषणा गरिएन ।
तर अहिलेको परिस्थिति बेग्लै छ । संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम अप्रत्यासित रुपमा जारी रहेकाले गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्न सक्ने विज्ञहरु बताउछन् । त्यसैले बेलैमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत पुगिसकेको छ ।
जनताको जीवनभन्दा ठूलो अरु केही हुन सक्दैन । किनभने ज्यान रहे न सबथोक हुने हो । अहिलेको जस्तै अवस्था जारी रह्यो भने स्वास्थ्य आपतकाल लागू गर्न ढिलाइ गर्न नुहने विज्ञहरुको भनाइ छ । तर मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य आपतकालसम्बन्धी छलफल अघि बढाइ सकेको छैन । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य संकटकाल एउटा विकल्प भए पनि अन्य विकल्पहरुका बारेमा पनि विज्ञहरुसँग छलफल भैरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य आपतकाल लगाउन सरकारसँग मापदण्ड नै छैन । अर्थात संक्रमित कति पुगेपछि आपतकाल लगाउने भन्ने मापदण्ड अहिलेसम्म बनाइएको छैन । यस्तो अवस्थामा देशमा उपलब्ध स्रोत साधनले कति थेग्न सक्छ,त्यसकै आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
तर स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भए जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनहरुको कडाईका साथ पालना गराइन्छ । यस्तै केही निजी अस्पताल तथा सम्पत्तिलाई समेत रोग नियन्त्रणमा सरकारले प्रयोग गर्नसक्छ ।
यसअघि संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गरेको थियो । झण्डै चार महिना लामो लकडाउनले देशको अर्थतन्त्र नै भताभुङ्ग अवस्थामा पुगेपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको थियो । त्यसबीचमा जनताबाट स्वस्फूर्त रुपमा लकडाउनको अवज्ञा गर्न थालेपछि सरकार लकडाउनको निर्णयबाट पछि हटेको थियो । त्यसपछि सरकारले कतै पूरै त कतै आंशिक रुपमा निषेधाज्ञा जारी गरेर संक्रमण फैलिन रोक्ने प्रयास गरेको थियो । तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सरकारका ती कुनै पनि निर्णय प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैको परिणामस्वरुप नेपालले कोरोना संक्रमणको तथ्यांकमा चीनलाई समेत पछि पारेको छ ।
यसरी संक्रमणको संख्या अप्रत्यासित रुपमा बढ्नुमा सरकार र जनता दुवै समान दोषी छन् । विश्वका चीन,अमेरिका,भारत लगायतका ठूला र सम्पन्न देशहरुलाई समेत आछ्यु आछ्यु बनाइरहेको कोरोना भाइरस कुनै रोग, कुनै महामारी नै होइन जस्तो व्यवहार सरकार र जनता दुवैमा देखिन्छ । मुखमा मास्क झुण्ड्याएर हातमा हेण्ड स्यानिटाइजर दलेको भरमा कोरोनालाई जित्न सकिने भ्रमले संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेकोमा दुई मत छैन । कोरोना महामरीको यो समयमा शहर बजारको दैनिकी सामान्य बेलाको भन्दा केही फरक छैन । सबैजना भीडभाडमा बेफिक्री र बेपर्वाह घुमिरहेका देखिन्छन् ।
सरकारको अकर्मण्यता पनि उतिकै भागीदार छ । संक्रमणकालमा सबै राजनीतिक दल र प्रशासनिक उच्च नेतृत्वकर्ताबीच तालमेल राम्रो हुनुपर्ने हो । के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष ? को नेता,को सर्वसाधारण सबै हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर अहिले नेपालको परिदृश्य त्यस्तो छैन । अर्को कुरा के हो नेपालमा जनताले नपेली सरकारको चेत नखुल्ने र सरकारले नदबाइ जनता ठीक ठाउँमा नबस्ने मानसिकता छ ।
सरकारको यस्तै अकर्मण्यता र नागरिकको अटेरी अहिलेकै स्थितिमा रहने हो भने नेपालमा दशैंअघि नै कोरोना महामारी भयावह स्थिति अर्थात नियन्त्रण वाहिर पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल लगाइहाल्नु विवेकी निर्णय हुनेछ ।